တနိုင်ငံလုံးမျှော်နေသော ရွှေမိုး လာပါပြီ - Real Gaming Myanmar
၁၉ ၅ ၂၀၁၉ ရက် မနက် နိုင်ငံ အောက်ပိုင်းကို စတင် ဝင်ရောက် လာတဲ့ မိုးဟာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာ ကျောက်ပတောင်း အထိ တက် လာပြီး နေရာ ကွက်ကြား ရွာသွန်းကာ၂၁ ရက်နေ့မှ တော့ ရှမ်းတောင် ကယား နဲ့ နေပြည်တော် မှ အောက်ပိုင်း ဒေသများ သဲသဲ မဲမဲရာံ သွန်းမှာ ဖြစ်လို့ ရန်ကုန် သားများ မြောင်းရှင်း ထားကြဘို့ လိုကြောင်းပါ …… ။ ။ ။ ။
အိမ် အမိုး ပြင်နေ သူများလည်း နက်ဖန် ၂၀ ရက် အပြီး ပြင်ထား ကြပါဗျာ ….. ။ ၂၃ ရက်နေ့ မှာတော့ တပြည်လုံး အနှံ ရွာသွန်းပြီး အစိမ်းရောင် အနီရောင် များကတော့ နေရာ ကွက်ပြီး မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင် သော ဒေသများ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ။ ။ ။
မေလ ကုန်သည်အထိ ရက်ဆက် ရွာသွန်းမယ့် အခြေအနေ ပါ နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်း များ ရေကြီး ရေလျှံ နိုင်သောကြောင့် လမ်း တံတားများ အထူး သတိထား ရပါ့မယ် ….. ။ အလယ်ပိုင်းဒေသများ မိုးရွာ လိုက် နေပူလိုက် နဲ့ အနေ ခက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ယခု ရွာမယ့် မိုးသည် ရေအား လျှပ်စစ်မီး အတွက် ကောင်းနိုင် ပေမယ့် မိုးရွာရင် မီးပျက် တတ်တဲ့ လိုင်းတွေ ကြိုပြင် ထားသင့် ပါကြောင်း အကြံပြု ပါရစေနော် ….. ။ ။ ။ ။
အလည် အပတ် ဘုရားဖူး ခရီးသွားများ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင် ပါတယ် …. ။ ။ ။ ။
၁၉ ၅ ၂၀၁၉ ရကျ မနကျ နိုငျငံ အောကျပိုငျးကို စတငျ ဝငျရောကျ လာတဲ့ မိုးဟာ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ နိုငျငံ အလယျပိုငျး မိတ်ထီလာ ကြောကျပတောငျး အထိ တကျ လာပွီး နရော ကှကျကွား ရှာသှနျးကာ၂၁ ရကျနမှေ့ တော့ ရှမျးတောငျ ကယား နဲ့ နပွေညျတျော မှ အောကျပိုငျး ဒသေမြား သဲသဲ မဲမဲရာံ သှနျးမှာ ဖွဈလို့ ရနျကုနျ သားမြား မွောငျးရှငျး ထားကွဘို့ လိုကွောငျးပါ …… ။ ။ ။ ။
အိမျ အမိုး ပွငျနေ သူမြားလညျး နကျဖနျ ၂၀ ရကျ အပွီး ပွငျထား ကွပါဗြာ ….. ။ ၂၃ ရကျနေ့ မှာတော့ တပွညျလုံး အနှံ ရှာသှနျးပွီး အစိမျးရောငျ အနီရောငျ မြားကတော့ နရော ကှကျပွီး မိုးထဈခြုနျး ရှာနိုငျ သော ဒသေမြား ဖွဈပါတယျ ….. ။ ။ ။ ။
မလေ ကုနျသညျအထိ ရကျဆကျ ရှာသှနျးမယျ့ အခွအေနေ ပါ နိုငျငံ တောငျပိုငျး မွောကျပိုငျး မြား ရကွေီး ရလြှေံ နိုငျသောကွောငျ့ လမျး တံတားမြား အထူး သတိထား ရပါ့မယျ ….. ။ အလယျပိုငျးဒသေမြား မိုးရှာ လိုကျ နပေူလိုကျ နဲ့ အနေ ခကျမှာ ဖွဈပါတယျ ….. ။ ယခု ရှာမယျ့ မိုးသညျ ရအေား လြှပျစဈမီး အတှကျ ကောငျးနိုငျ ပမေယျ့ မိုးရှာရငျ မီးပကျြ တတျတဲ့ လိုငျးတှေ ကွိုပွငျ ထားသငျ့ ပါကွောငျး အကွံပွု ပါရစနေျော ….. ။ ။ ။ ။
အလညျ အပတျ ဘုရားဖူး ခရီးသှားမြား အတှကျ အခကျအခဲ ဖွဈနိုငျ ပါတယျ …. ။ ။ ။ ။
Previous: ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အဟော နှင့် ယတြာ
Next: ပျိုမေတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်း (၁၀) မျိုး